सीके राउतलाई संसद्मा ल्याउन यस्तो चलखेल	Postpati – News For All
पत्रपत्रिकाबाट August 14, 2019 प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
साउन २९, काठमाडौं । विखण्डनवादी राजनीति छाडेर मूलधारमा आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतलाई संघीय संसद्मा ल्याउन पहल सुरु भएको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् । सप्तरी क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवलाई राजीनामा गर्न लगाएर सीके राउतलाई संघीय संसद्मा ल्याउन पहल सुरु भएको हो ।